Fampandrian-tany – Nanova tetika ireo mpisambotra an-dRemenabila - AO RAHA Gazety Malagasy Online	Ny gazety Ao RahaTahiry
Fampandrian-tany – Nanova tetika ireo mpisambotra an-dRemenabila
Fomba fiady hafa indray no entin’ireo miaramila mikaroka an-dReme-nabila sy ny tariny any amin’ny faritra atsimon’ ny Nosy amin’izao foto-ana izao.
« Efa miditra amin’ ny dingana faharoa ny paik’ady, ka izay no tsy ahafahan’ny any an-toe-rana mampita vaovao noho ny hasarobidin’ny ain’ireo olona manatanteraka ny iraka. Avoaka ho fanta-bahoaka tsy ho ela anefa ireo vokatra azo tany an-toerana », hoy ireo mpampita vaovao avy amin’ny Tafika sy ny Zandarimaria izay nanao valandresaka ho an’ny mpanao gazety, omaly tetsy amin’ny Toby Ratsimandrava.
Noresahina nandritra ity fotoana ity ihany koa ny momba ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ao amin’ny faritra voaaro any Ididy Ambatondra-zaka sy ny asan-dahalo tany Bongolava, izay efa nahasamborana olona dimy. Ny roa tamin’ireo no efa any am-ponja.
Haja R. 0 Fanehoan-kevitra	Lahatsoratra hafaMiverena @ pejy fandraisana
Faran’ny herinandron’ny Pentekosta – Olona telo maty, 264 naiditra hôpitaly, enina toran’ny toaka(0)
Ankizilahikely iray no maty an-drano, tetsy Ankadikely Ilafy, ny alahadin’ny Pentekosta teo. Tonga teny an-toerana mpamonjy voina saingy efa tafavoakan’ ny fokonolona ilay vatana mangatsiaka. Ramatoa iray ihany koa no fantatra fa maty no-faohin’ny kamiao, tany Ambohidratrimo, ny sabotsy teo tokony ho tamin’ny 4 ora sy sasany maraina. Ankoatra ireo dia razana tovolahy iray 23 taona ihany koa no nisy nanatitra teny amin’ny hôpitaly Joseph Ravoahangy Andria­navalona. Tsy mbola voafa-ritra izay antony nitarika ny fahafatesany. Raha ny tarehimarika avy eo anivon’ity hôpitaly ity ihany dia nisy olona telo nodimandry tao, ny sabotsy teo. Amin’ny ankapobeny aloha, raha ny tarehimarika mahakasika ireo loza niseho nandritra ny fetin’ny Pentekosta dia hita ho nihena raha nitaha tamin’ny fetin’ny Paska. Raha nahatratra 380 ireo voatery nomena fitsa­boana teo anivon’ity hôpitaly lehibe indrindra eto Madagasikara ity tamin’ny fetin’ny Paska dia 264 kosa izy ireo tamin’ity fetin’ny Pentekosta ity. Tarehimarika voaangona nanomboka ny sabotsy 18 mey teo io. Nandritra ny tontolo andron’ny fetin’ny Pentekosta kosa dia 56 no isan’ireo marary naiditra tao amin’ity hôpitaly ity ihany. « Ratra vokatry ny adiady no tena maro tamin’ ireo olona niditra tato aminay. Manaraka azy eo kosa ny lozam-pifamoivoizana izay azo lazaina ho nihena tamin’ity fety ity », hoy ny nambaran’ny mpitsabo iray eo anivon’ity hôpitaly ity. Raha ny teo anivon’ny Hjra hatrany dia enina ireo tsy nahatsiaro tena noho ny toaka notsaboina tao, ka lehilahy ny 5 tamin’ireo ary vehivavy kosa ny iray. Haja Randrianantoandro
Fisolokiana Banky foibe – 13 lahy saika haka vola 20 miliara Ar saron’ny polisy(0)
Olona 13 voarohirohy ho nikasa haka vola 20 miliara Ar tao amin’ny Banky Foibe, etsy Antaninarenina, no saron’ny polisy ny zoma tolakandro teo, tokony ho tamin’ny 2 ora sy sasany. « Nitondra fiara 4×4 dimy izy ireo ka niditra tsiroaroa sy tsitelotelo tao amin’ny Banky foibe. Rehefa haka volabe sahala amin’izany mantsy ao amin’ ny banky dia tsy maintsy miaraka tsiroaroa na tsite­lo­telo satria tsy maintsy misy mibata ireo vola rehefa avoaka », hoy ny loharanom-baovao iray avy eo anivon’ity banky ity. « Rehefa tafiditra tao amin’ny banky izy ireo dia nizara dimy ary samy nitondra taratasim-bola 4 miliara ariary avy. Taratasim-bola sandoka avy ao amin’ny Tahirim-bolam-panjakana no saika nampiasain’ireo olona ireo tamin’ity fikasan-dratsiny ity. Vao tonga teo amin’ny toerana fakam-bola dia fantatra fa sandoka ireo taratasy nokasaina hakana izany ka nampanenoana ny fanairana. Ny tena nahavariana tamin’ireo taratasim-bola sandoka ireo dia sonia ara-dalàna avy eo anivon’ny Tahirim-bolam-panjakana no nangalarin’izy ireo », hoy hatrany ilay loharanom-baovao. Tonga teny an-toerana nisambotra ireo olona ireo ny avy amin’ny polisy ara-toekarena ka tratra avokoa izy ireo niaraka tamin’ireo dimy lahy mpamilin’ireo fiara 4×4. Mbola tazomina etsy amin’ny biraon’ny polisy mi-sahana ny ady heloka bevava ireo voarohirohy rehetra amin’izao fotoana izao. H.R
Ambatomanoina – Rangahy 43 taona kilan’ny afo irery tao an-tranony(0)
Namoizana ain’ olona ny hain-trano nitranga tao amin’ny fokontany Ambato­manoina, kaominina Ambatomanoina, distrikan’Avaradrano, ny alakamisy lasa teo. Rangahy iray 43 taona no maty kilan’ny afo tanteraka. Voalazan’ny tatitry ny zandarimaria fa nihidy aman-trano irery ity niharam-boina ity. Ny fanadihadiana nataon’ny mpitandro ny filaminana ihany koa no nahafantarana fa avy nisotrosotro ilay rangahy. Tsy voafaritra mazava hatreto ny antony nahatonga ny loza fa anisan’ny tomba­tombana ny hoe afon-tsigara niitatra. Efa nananika ny tafo ny afo vao hitan’ny teo amin’ ny manodidina. Levona tsy nisy noraisina ireo entana rehetra tao an-trano. Ny foko­nolona tao an-toerana no nanampy tamin’ny famonoana ny afo. Maminiaina Andri
Fianarana sady kilalao – Vita ny fizaràna loka tamin’ny »Rallye mathématiques »(0)
Nifarana ilay fifaninanana faha-12 nomena anarana «Rallye Mathematiques», izay karakarain’ny fikambanan’ny mpampianatra ity taranja ity, GEMMA, isan-taona. Natao teny amin’ny Lycée français, eny Ambatobe, tamin’ny farany herinandro teo, ny fizarana ny loka tamin’ireo nandresy tamin’izany. «Mpianatra 14 000 mahe­ry avy amin’ny liseam-panjakana sy tsy miankina mane­rana ny Nosy no nandray anjara tamin’izany. Natao indrindra mba tsy hatahoran’ny ankizy ity taranja ity intsony sy ny hilalaovana azy ka hahaizany mampiasa azy amin’ny fiainany an-davanandro no anton’ny fifaninanana», hoy Ramahazosoa Prosper, mpikambana ao amin’ny GEMMA. Mpianatra avy ao amin’ny Lycée français, Ambatobe sy ny Lycée Jules Ferry, eny Faravohitra ary ny Kolejy Jules Vernes, ao Antsirabe no nitana ny laharana voalohany, araka ny fanazavana azo tamin’ i Dubois Sandrine, mpandrindra ny fifaninanana. B.A
Fifaninanana – Hiaro ny fanondrahana mandeha amin’ny herin’ny masoandro Ny Aina(0)
Nanainga ny zoma 17 mey, hiaro ny fikarohany, izay fitaovana fanondrahana mandeha ho azy ary mandeha amin’ny herin’ny masoandro Razanelison Ny Aina, tovolahy 17 taona ary kilasy famaranana ao amin’ny Collège La Lumière International. Any Indonezia no hanaovana ny fifaninanana momba ny siansa antsoina hoe ISPRO (International Science Project Olympiade). Mpianatra avy amin’ny sekoly maro maneran-tany miainga avy amin’ny vokatry ny fikarohana na famoronana nataon’izy ireo no handray anjara amin’ny fifaninanana. Automatic Irrigation System by Solar Energy na fomba fanondrahana tany mandeha ho azy ary mandeha amin’ny herin’ ny masoandro no lohatenin’ny tetikasa entiny amin’izany fifaninanana izany. Tetikasa izay miezaka ny mampiasa ny angovo miaro ny tontolo iainana ary manampy amin’ny fanondrahana velaran-tany samihafa. “Miainga amin’ny fitrohan’ny milina ny rano ity fitaovana ity ary mitatitra izany mivantana manondraka ny velaran-tany raha mifanakaiky ny rano sy ny tany hotondrahana, miampy fantsona kosa izany raha mifanalavitra” hoy ny fanazana fohy nentiny talohan’ny nandehanany. Faly Ran. Hijery hafa
Remenabila, Mpanoratra Rijakely, 19.07.2012, 08:25	FIARAHAMONINA
Fiarahamonina – Vary notsimponina no niatrehan’ireo sahirana ny Pantekosta(0)
Karaman’ny tsy miankina – Mbola tsy nisy didim-panjakana ilay fampiakarana 8%(0)
Minisiteran’ny fahasalamana – Nampitandrina momba ireo dokam-barotra amin’ ny fitaovana manasitrana(0)
Fanabeazana – Nahazo tambajotra “internet” ny tanoran’ i Soavinandriana Itasy(0)
Vu d’ailleurs	Lahatsoratra vaovao	Raharaham-pifidianana – Mananontanona ny fanilihana ireo kandidà niara-nihosona tamin-dRajoelina
Firotsan-kofidiana – Tsy hiverin-dalana intsony Ravalomanana mivady
Hafatry ny Pentekosta – Niaiky ny fahasarotan’ny ampihavanana ny Ffkm Dia tany Nosy Be – Mbola manantena ny hijanona ela eo amin’ny toerany Rajoelina